နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…. – Shwe Naung
နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ….
N N | May 12, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင် လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင် လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေကို လ ည်း ရို က်ကူး လျက်ရှိ နေသူ လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယော ကျာ်းလေး ပရိသ တ်ေ တွရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက်စာမျ က်နှာထက် တင်ပေး လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက် စား ခန ္ဓာကို ယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ် တော်လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။
သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်ေ လးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှ တရားလေးပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
ယခုတစျခါမှာလညျး နနျးမှစေံ က သူမရဲ့ Facebook Mydayမှာ အမိုကျစား ဗီဒီယို လေးတစျခုကို တငျပေး လာခဲ့ပါတယျ ။
ဒါကတော့ ညှို့အားပွငျးတဲ့ အကွညျ့တှနေဲ့ မွငျသူတိုငျး ရ ငျခု နျသံတှေ မွနျသှားရလောကျအောငျ အမိုကျစားရိုကျကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးဖွစျလို့ ခစြျပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျအတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေး လိုကျပါတယျနောျ ။
ကဲ…နနျးမှစေံ ရဲ့ ဗီဒီယိုေ လးကို ကွညျ့ပွီး ပရိသတျကွီးက အသညျးလေးတှပေေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုကျပါနဲ့နောျ…… ။
Source:Nang Mwe San
ဖွေးဥထွက်နေတဲ့ ပေါင်တန်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အတွင်းသား လေးတွေ ပေါ်နေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
မြောက်ဥက္ကလာ က ဘယ်မြို့ ထိထိ ကြွပေးခဲ့တာ ကို ဘာမှ မလုပ်ပေး ကြတော့ဘူးလား ဆိုပြီး ယူကြုံးမရ ဝမ်းနည်းစွာ နဲ့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ မြတ်ကေသီအောင်
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ နန်းသီရီမောင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………